Ukuhlukaniswa Komphakathi: Kungani, Nini Futhi Kanjani
Kwavela okokuqala ukushicilelwa yi-Ariadne Labs ngoMashi 13, 2020 ngaphansi kwesihloko esithi "Ukuhlukaniswa Komphakathi: Lolu akulona usuku lweqhwa" | Kubuyekezwe Mashi 14, 2020
Le ndatshana yabhalwa umuntu wase-US futhi, ngakho, iqukethe imininingwane nezinkomba ezise-US Kodwa okuqukethwe okuningi kwayo kuzolingana nanoma yiliphi izwe namasiko emhlabeni futhi
Ngu-Asaf Bitton, MD, MPH
Ngiyazi ukuthi kukhona ukudideka okuthile okumele kwenziwe ngokulandelayo phakathi nalesi sikhathi esingakaze sibonwe sobhubhane, ukuvalwa kwezikole, nokuphazamiseka komphakathi okwandile. Njengodokotela wokunakekelwa okuyisisekelo nomholi wezempilo yomphakathi, ngibuzwe abantu abaningi ngombono wami, futhi ngizowunikeza ngezansi ngokususelwa olwazini olungcono kakhulu engilutholwayo namuhla. Le yimibono yami yangasese, futhi ukuthatha kwami izinyathelo ezidingekayo ezizayo.
Engingakusho ngokusobala ukuthi esikwenzayo, noma esingakwenzi, ngeviki elizayo kuzoba nomthelela omkhulu esimweni sendawo se-coronavirus sendawo futhi mhlawumbe sikazwelonke. Sesisondele ezinsukwini eziyi-11 ngemuva kwe-Italy ( idatha yase-US ) futhi ngokujwayelekile siyalandelela ukuphinda okwenzeka ngeshwa lapho futhi kulo lonke elaseYurophu maduze.
Ngalesi sikhathi, ukutholakala kokutholwa kokutholwa nokuhlolwa okwandisiwe kuyingxenye yecebo elidingekayo. Kufanele sithuthele ekunciphiseni ubhubhane ngokusakazeka kabanzi, ukungakhululeki, kanye nokusabalalisa okuphelele komphakathi . Lokho kusho ukuthi hhayi ukuvala kuphela izikole, umsebenzi (ngangokunokwenzeka), ukubuthana kwamaqembu, nemicimbi yomphakathi, kodwa futhi nokwenza izinqumo zansuku zonke zokusuka kude nabanye ngangokunokwenzeka kuFlatten The Curve ngezansi.
Uhlelo lwethu lwezempilo ngeke lukwazi ukubhekana nenani labantu abazoludinga ukunakekelwa okuthe xaxa uma singazihlanganisi isibalo futhi sizokwazi ukuqhelelana nomphakathi kusukela manje. Ngosuku olujwayelekile, sinemibhede engabalelwa ku-45,000 enabasebenzi base-ICU kuzwelonke, engahlanganiswa phezulu enkingeni ifike ku-95,000 ( idatha yase-US ). Ukuqagela okusesilinganisweni kusikisela ukuthi uma izindlela zokutheleleka zamanje zibamba, amandla ethu (ngaphakathi nasazweni) angakhungatheka kusukela phakathi maphakathi no-Ephreli. Ngakho-ke, amasu kuphela esingasivimbela kulokhu maqondana ne-trajectory yilawo asenza ukuthi sisebenzisane njengomphakathi ukugcina impilo yomphakathi ngokuhlala ngokwehlukana.
Ukuhlakanipha, kanye nesidingo, sale ndlela enolaka kakhulu, yasekuqaleni, futhi eyeqisayo yokwehlukaniswa kwezenhlalo ingatholwa lapha . Ngingakunxusa ukuthi uthathe umzuzu wokuhamba ngamagrafu asebenzayo - azodlulisela leli phuzu ngalokho okudingeka sikwenze manje ukugwema ubunzima obubi kakhulu ngokuzayo. Izifundo zomlando kanye nokuhlangenwe nakho kwamazwe omhlaba wonke kusikhombisile ukuthi ukuthatha lezi zenzo kusenesikhathi kungaba nomthelela omkhulu ebuhleni bokugqashuka. Ngakho-ke ingabe le ndlela ithuthukisiwe yokuhlukaniswa kwezenhlalo isho kanjani nsuku zonke, lapho izikole zikhanseliwe?
Nazi ezinye izinyathelo ongaqala ukuzithatha manje ukuze ugcine umndeni wakho uphephile futhi wenze ingxenye yakho ukugwema inkinga ebangwayo:
1. Sidinga ukucindezela abaholi bendawo yethu, abesifunda nabezwe lonke ukuthi bavale ZONKE izikole nezikhala zomphakathi futhi bakhansele yonke imicimbi nemibuthano yomphakathi manje .
Impendulo yendawo, idolobha ngedolobha ngeke ibe nomphumela oludingekayo. Sidinga indlela eya ezweni lonke, kulezi zikhathi ezinzima. Xhumana nommeli wakho kanye nombusi wakho ukubanxusa ukuthi benze umthetho wokuvalwa komhlaba wonke. Njengamanje, izifunda eziyisithupha sezikwenzile lokho. Isimo sakho kufanele sibe ngesinye sazo. Futhi unxuse abaholi ukuthi bakhuphule imali yokulungiselela izimo eziphuthumayo futhi bandise ukuhlolwa kwamandla okuhlola okuphambili ngokubaluleke kakhulu nokubalulekile. Sidinga nezishayamthetho ukuthi zikhiphe imali yokuthola ikhefu lokugula ekhokhelwa kangcono kanye nemihlomulo yokungasebenzi ukuze isize abantu bangenzi ikholi efanele yokuhlala ekhaya njengamanje.
2. Akukho zidlali zezingane, amaphathi, abalala, noma imindeni / abangane abavakashela izindlu nezindlu zabo.
Lokhu kuzwakala ngokweqile ngoba kunjalo. Sizama ukudala ibanga phakathi kwamayunithi omndeni naphakathi kwabantu. Kungaphatha kabi imindeni enezingane ezincane, izingane ezinamakhono noma izinselelo ezihlukile, kanye nasezinganeni ezivele zithande ukudlala nabangane bazo. Kodwa noma ngabe ukhetha umngani oyedwa kuphela ukuthi abe ngaphezulu, udala izixhumanisi ezintsha namathuba wohlobo lokudlulisela izikole ukuvala konke ukuvalwa kwesikole / umsebenzi / umcimbi wethu. Izimpawu ze-coronavirus zithatha izinsuku ezine kuya kwezihlanu ukuziveza. Umuntu oza ebheka kahle angalidlulisela igciwane. Ukwabelana ngokudla kuyingozi ikakhulukazi - angikukhuthazi ukuthi abantu bakwenze lokho ngaphandle kwemindeni yabo.
Sesivele sithathe izinyathelo ezedlulele zenhlalo ukubhekana nalesi sifo esingathi sína - masingayisebenzisi ngenkuthalo imizamo yethu ngokuba nezinga eliphakeme lokuxhumana komphakathi ezindlini zabantu esikhundleni sezikole noma ezindaweni zokusebenza. Nakulokhu - ukuhlakanipha kokuqalwa kokuhamba phambili kokuhlukumeza komphakathi ukuthi kunganciphisa ijika ngaphezulu, kunikeze uhlelo lwethu lwezempilo ithuba lokuthi lungakhungathekiswa, futhi ekugcineni kunganciphisa ubude nesidingo sezikhathi ezinde zokudeqeka ngokweqile komphakathi ngokuhamba kwesikhathi (bona ukuthi yini eye idluliselwe e-Italy naseWuhan). Sidinga sonke ukwenza ingxenye yethu ngalezi zikhathi, noma ngabe kusho ukungakhululeki isikhashana.
3. Zinakekele wena kanye nomndeni wakho, kepha gcina ibanga lomphakathi.
Ukuzivocavoca umzimba, ukuhamba / ukugijimela ngaphandle, futhi ukuhlala uxhumekile ngocingo, ividiyo, neminye imithombo yezokuxhumana. Kepha uma uphumela ngaphandle, yenza konke okusemandleni ukukhathalela okungenani amamitha ayisithupha phakathi kwakho namalungu angewona omndeni. Uma unezingane, zama ukungasebenzisi izikhungo zomphakathi njengezakhiwo zendawo yokudlala, ngoba ama-coronavirus angahlala ngopulasitiki nensimbi izinsuku ezifika kweziyisishiyagalolunye, futhi lezi zinhlaka azihlanjululwa njalo.
Ukuya ngaphandle kuzobaluleka ngalezi zikhathi ezingejwayelekile, futhi isimo sezulu siyathuthuka. Phumela ngaphandle nsuku zonke uma ukwazi, kepha hlukana nomzimba nabantu abangaphandle komndeni wakho noma abahlala nabo. Uma unezingane, zama ukudlala umdlalo webhola lomndeni kunokuba wenze izingane zakho zidlale nezinye izingane, ngoba ezemidlalo ngokuvamile zisho ukuthintana ngqo nabanye ngokomzimba. Futhi yize singafisa ukuvakashela abadala emphakathini wethu uqobo, ngeke ngivakashele amakhaya asebekhulile noma ezinye izindawo lapho kuhlala khona iningi labantu asebekhulile, ngoba basengozini enkulu yezinkinga nokufa kwabantu abavela kuma-coronavirus.
Ukusabalalisa umphakathi kungakuthinta (phela, iningi lethu liyizidalwa zenhlalo). I- CDC inikeza izeluleko nezinsizakusebenza zokunciphisa lo umthwalo, futhi ezinye izinsizakusebenza zinikezela ngamasu okubhekana nengcindezi eyengeziwe ngalesi sikhathi.
Sidinga ukuthola ezinye izindlela zokunciphisa ukwahlukaniswa komphakathi emiphakathini yethu ngezindlela ezibonakalayo esikhundleni sokuvakasha kwabantu.
4. Yehlisa imvamisa yokuya ezitolo, ezindaweni zokudlela, nasezitolo zekhofi ezikhona.
Yebo, ukuya ezitolo zokuthenga kuyodingeka, kepha zama ukukukhawulela futhi uhambe ngezinye izikhathi lapho umatasa khona. Cabanga ukucela izitolo zokudla ukuthi ziveze abantu emnyango ukuze kunciphise inani labantu abangaphakathi esitolo nganoma yisiphi isikhathi. Khumbula ukugeza izandla zakho ngaphambi nangemva kohambo lwakho. Futhi shiya imaski namagilavu wezokwelapha ochwepheshe bezokwelapha - siyabadinga ukuba banakekele abagulayo. Gcina ibanga kude nabanye ngenkathi uyothenga - futhi khumbula ukuthi ukufaka izinhlinzeko kunomthelela ongemuhle kwabanye ngakho-ke thenga okudingayo bese ushiye wonke umuntu. Ukudla okuphuma nokudla kungukudla ngaphezu kokudla ekhaya unikezwe izixhumanisi phakathi kwabantu abalungisa ukudla, ukuthutha ukudla kanye nawe. Kunzima ukwazi ukuthi leyongoti iyimalini, kepha ngokuqinisekile iphakeme kunokuyenza ekhaya. Kepha ungaqhubeka futhi ukusekela amabhizinisi akho asendaweni (ikakhulukazi izindawo zokudlela kanye nabanye abathengisi) ngalesi sikhathi esinzima ngokuthenga izitifiketi zezipho online ongazisebenzisa kamuva.
5. Uma ugula, hlala wedwa, hlala ekhaya, bese uthintana nochwepheshe wezokwelapha.
Uma ugula, kufanele uzame ukuzihlukanisa nomndeni wakho wonke endaweni ohlala kuyo ngangokunokwenzeka. Uma unemibuzo mayelana nokuthi uyafaneleka yini noma kufanele uhlolwe ukuhlolwa kwe-coronavirus, ungashayela ithimba lakho lokunakekelwa okuyisisekelo futhi / noma ubheke ukubiza uMnyango Wezempilo Yomphakathi eMassachusetts ngo-617.983.6800 (noma umnyango wezempilo wesifundazwe sakho uma ungaphandle kweMassachusetts ). Musa nje ukuya emtholampilo we-ambulensi - shayela kuqala ukuze bakunikeze izeluleko ezihamba phambili - ezingaba ukuya esikhungweni sokuhlola ngokusebenzisa ukuvakasha noma ukuvakasha okubonakalayo kuvidiyo noma ngocingo. Vele, uma kungukuthi ucingo oluphuthumayo 911.
Ngiyabona ukuthi kuningi okwakhelwe kulezi ziphakamiso, nokuthi zimele umthwalo wangempela kubantu abaningi, imindeni, amabhizinisi kanye nemiphakathi. Ukusabalalisa umphakathi kunzima futhi kungathinta kabi abantu abaningi, ikakhulukazi labo ababhekene nobuthakathaka emphakathini wethu. Ngiyabona ukuthi kunokungalingani okuhleliwe nokwenhlalo okwakhelwe ngaphakathi nezincomo zokuhlukaniswa komphakathi ezungezile. Singakwazi futhi kufanele sithathe izinyathelo zokuqinisa impendulo yethu yomphakathi kubantu ababhekene nokuphepha kokudla, udlame lwasemakhaya, kanye nezinselelo zezindlu, kanye nobunye ubunzima obuningi bomphakathi.
Ngiyabona futhi ukuthi akuyena wonke umuntu ongenza konke. Kepha kufanele sizame konke okusemandleni ethu njengomphakathi, kusukela namhlanje. Ukuthuthukisa ukusakazwa komphakathi, noma usuku olulodwa, kungenza umehluko omkhulu .
Sinethuba lokulungiselela ukusindisa izimpilo ngezenzo esizenzayo njengamanje esingeke sibe nazo emasontweni ambalwa. Kubaluleke kakhulu empilweni yomphakathi. Kungumsebenzi wethu futhi njengomphakathi ukwenza ngenkathi sisafuna ukukhetha kanti nezenzo zethu zingaba nomthelela omkhulu.
U-Asaf Bitton, MD, MPH, ungumqondisi omkhulu we- Ariadne Labs eBoston, MA.
Landa i-PDF eprintwayo yale ndatshana
Ufuna ukubuyekeza ukuhumusha? Funda futhi ufake isandla kwikhodi yomthombo . Umfanekiso ovela opendoodles
Kungani le webhusayithi? Ekuqaleni ngangifuna ukuxoxa nomakhelwane bami eFrance ngesihloko sokuqala. Kodwa ukwazi ukuthi abasifundanga isiNgisi, nokuthi ngifuna ukufaka isandla emzamweni wokusiza umphakathi, ngenza le webhusayithi.
Le webhusayithi isebenzisa i-Google Humusha ukwenza okuqukethwe kutholakale ngezilimi eziyi-109 +.
Iwebhusayithi efanayo: https://staythefuckhome.com/ .